Disgraceful ICJ decision irresponsible and unnecessary delay to justice - Special Advisory Council for Myanmar
Home Statements Disgraceful ICJ decision irresponsible and unnecessary delay to justice
Disgraceful ICJ decision irresponsible and unnecessary delay to justice
February 21st, 2022 • Category Statements • 851 Views
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ဆိုးရွားသော ဆုံးဖြတ်ချက်သည် တာဝန်ယူမှုကင်းမဲ့ပြီး တရားမျှတမှုအတွက် မလိုအပ်သည့် နှောင့်နှေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
21 February 2022: The hearings concerning The Gambia’s case against Myanmar at the International Court of Justice (ICJ) areadangerous and unnecessary delay to justice that could worsen the situation in Myanmar, says the Special Advisory Council for Myanmar (SAC-M).
The ICJ is hosting public hearings from today in the case brought against Myanmar by The Gambia for alleged breaches of the Genocide Convention. The hearings are taking place with the illegal military junta representing Myanmar before the Court, despite the junta having no legal or democratic legitimacy, and no claim to effective control over the people or territory of Myanmar. No other United Nations (UN) body has accepted the junta as representing Myanmar.
“It is outrageous for the ICJ to proceed with these hearings on the basis of junta representation. The junta is not the government of Myanmar, it does not represent the State of Myanmar, and it is dangerous for the Court to allow it to present itself as such,” said Chris Sidoti of SAC-M. “The junta leaders orchestrated the genocidal atrocities against the Rohingya – the subject of this case – and are the cause of the current violence and suffering in the country. They are trying to entrench themselves as leaders of Myanmar, including by claiming international recognition. If they succeed, the chances of the Rohingya and all peoples of Myanmar achieving justice where it matters – on the ground in Myanmar – will be severely diminished.”
The hearings are on the preliminary objections filed by Myanmar in January 2021. Preliminary objections are procedural issues that the Court must adjudicate on before it can proceed to the merits of the case. The National Unity Government of Myanmar (NUG) has communicated to the Court that, as the legitimate government appointed by Myanmar’s elected parliamentarians, it is the proper representative of Myanmar in the case. The NUG has also advised the Court that it withdraws all preliminary objections.
“These hearings, with the junta claiming to represent Myanmar, areadisgrace,” said Yanghee Lee of SAC-M. “They are also an unnecessary delay in the case. The NUG is the only entity with the authority to represent Myanmar before the Court and it has withdrawn the preliminary objections. Those objections are the focus of these hearings and will require several months of deliberation by the judges. The Court should instead recognise the NUG’s authority, formally dismiss the objections and move swiftly to dealing with the actual substance of the case, the atrocities against the Rohingya people.”
The ICJ is required to take into account the attitude adopted by the UN General Assembly concerning questions of member states’ recognition and accreditation. Last year, the General Assembly rejected the military junta’s attempts to gain recognition there. The General Assembly continues to recognise the credentials of Myanmar’s Ambassador to the UN, U Kyaw Moe Tun, who the NUG has appointed as acting alternate agent to the ICJ.
“For the ICJ to disavow Myanmar’s representation at the General Assembly and recognise the junta is to go beyond its jurisdiction and politicise the issue. It isahigh point in UN dysfunctionality,” said Marzuki Darusman of SAC-M. “The decision isatotal affront to the Myanmar people, including the Rohingya. The Court is simply complicit in the military junta’s violent attempt to seize power over Myanmar and shield itself from justice.”
Download the English version of the statement: SAC-M PR ICJ Hearings ENGLISH
နေ့စွဲ ။ ။ ၂၁၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၂။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် မြန်မာနိုင်ငံအား ဂန်ဘီယာ နိုင်ငံမှ စွဲချက်တင်ထားသည့် အမှုအခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကြားနာစစ်ဆေးမှုများသည် စိုးရိမ်ဖွယ် ဖြစ်ပြီး တရားမျှတမှုအတွက် မလိုအပ်သော နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွားလာစေနိုင်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေး ကောင်စီမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဂျီနိုဆိုက် ကွန်ဗင်းရှင်းအား ချိုးဖောက်လျက်ရှိသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ၏ တရားစွဲဆိုချက်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် ယနေ့မှစ၍ ကြားနာ စစ်ဆေးမှုများအား ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်။ စစ်ကောင်စီမှာ တရားဝင် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း မရှိသည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ပြည်သူလူထု သို့မဟုတ် နိုင်ငံအတွင်းရှိ နယ်မြေများအပေါ် ထိရောက်သည့် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်မရှိသော်လည်း တရားရုံးရှေ့မှောက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် တရားမဝင်စစ်ကောင်စီမှ ကိုယ်စားပြုလျက်ရှိသည်။ ကုလသမဂ္ဂ၏ အခြား မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ စစ်ကောင်စီအနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုနေခြင်းအပေါ် လက်ခံ အသိအမှတ်ပြုထားခြင်း မရှိပါ။
“အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးအနေနဲ့ စစ်ကောင်စီက ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ ဒီကြားနာမှုတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတာဟာ အလွန်ဆိုးရွားပြီး လက်ခံနိင်ဖွယ်မရှိဘူး။ စစ်ကောင်စီက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရမဟုတ်ဘူး။ သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားမပြုဘူး။ ဒါကြောင့် တရားရုံးအနေနဲ့ ဒီလို ကိုယ်စားပြုတာကို လက်ခံတာက အန္တရာယ်ရှိတယ်။” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးအဖွဲ့မှ Chris Sidoti က ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ၎င်းမှ “စစ်ကောင်စီရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဒီအမှုအခင်းရဲ့ အဓိက အချက်ဖြစ်တဲ့ မျိုးနွယ်စုတစ်ခုကို အမြစ်ပြုတ်စေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဖြစ်ပွားစေခဲ့တဲ့ သူတွေလည်း ဖြစ်တယ်။ သူတို့တွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ် လုံးဝသတ်မှတ်ထားပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုရဖို့ကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့အောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူအားလုံးနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ အတွက် တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ တရားမျှတမှုရရှိဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေက အင်မတန် နည်းပါးသွားလိမ့်မယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။”
ကြားနာမှုများသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ကနဦး ကန့်ကွက်ချက်များအတွက် ဖြစ်သည်။ ကနဦးကန့်ကွက်ချက်များ ဆိုသည်မှာ တရားရုံးမှ အမှုအား လက်ခံနိုင်ခြင်း ရှိမရှိကို စီရင်ချက် မချမီ စီရင်ဆုံးဖြတ်ရမည့် ကျင့်ထုံးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ခံ အမတ်များနှင့် ခန့်အပ်ဖွဲ့စည်းထားသည့် နိုင်ငံ၏ တရားဝင် အစိုးရဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ ၎င်းတို့သည် ဤအမှုအခင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သင့်လျော်သည့် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်ဟု တရားရုံးသို့ ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ကနဦး ကန့်ကွက်ချက်များအားလုံးကို ရုတ်သိမ်းကြောင်းကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရမှ တရားရုံးသို့ တရားဝင် အကြောင်းကြားခဲ့သည်။
“ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စစ်ကောင်စီကကိုယ်စားပြုတဲ့ ဒီကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေဟာ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်။” ဆက်လက်၍ “စစ်ကောင်စီကကိုယ်စားပြုခြင်းဟာ ဒီအမှုမှာ မလိုအပ်တဲ့ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုတွေ ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရဟာ တရားရုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုဖို့ အာဏာရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့က ကနဦးကန့်ကွက်ချက်တွေကို ရုတ်သိမ်းပြီးဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီကန့်ကွက်ချက်တွေက ဒီတရားခွင်အတွက် အဓိကဖြစ်ပြီး တရားသူကြီးတွေအနေနဲ့ လပေါင်းများစွာ ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်လိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအစား တရားရုံးအနေနဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရရဲ့ အာဏာကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ငြင်းဆိုချက်တွေကို တရားဝင်ပယ်ဖျက်ပြီးတော့ အမှန်တကယ် အမှုအခင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် မျိုးနွယ်စုပြုတ်အောင် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် လျင်လျင်မြန်မြန် ပြုလုပ်ရမယ်။” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးကောင်စီမှ Yanghee Lee က ပြောကြားခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံးအနေဖြင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှ လက်ခံအတည်ပြုထားသည့် သဘောထားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင် စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြုမှုရရှိရန် ကြိုးပမ်းမှုကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ ညီလာခံမှ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ ညီလာခံမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းအား ဆက်လက် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ၎င်းအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး ရှေ့မှောက်တွင် ကိုယ်စားပြုသူ အဖြစ် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရမှ ခန့်အပ်ထားသည်။
“အထွေထွေညီလာခံမှာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်ကို ငြင်းပြီး စစ်အာဏာရှင်ကို အသိအမှတ်ပြုတယ် ဆိုတာ ICJ အနေနဲ့ သူ့ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထက် ကျော်လွန်ပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ နွယ်လာတယ်။ ဒါဟာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်တစ်ခု ဖြစ်တယ်။” ဆက်လက်၍ “ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေ အပါအဝင် မြန်မာပြည်သူတွေကို လုံး၀ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်။ စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အာဏာသိမ်းဖို့နဲ့ သူတို့ကိုယ်ကို တရားမျှတမှုကနေ အကာအကွယ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာ တရားရုံးက ဝင်ပြီး ပတ်သက်နေတယ်။” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးကောင်စီမှ Marzuki Darusman က ပြောသည်။
Download the Burmese version of the statement: SAC-M PR ICJ Hearings BURMESE